OneUp: स्वचालित रूप मा तपाइँको आरएसएस फीड बाट गुगल मेरो व्यवसाय मा पोस्ट | Martech Zone
यदि तपाइँ एक स्थानीय व्यवसाय हुनुहुन्छ, यो महत्वपूर्ण छ कि तपाइँ दुबै एक वेबसाइट को रूप मा राम्रो संग अनुकूलित छ कि एक Google मेरो व्यापार खाता को रूप मा बनाए राख्नु हुन्छ। खोज इन्जिन प्रयोगकर्ताहरु को विशाल बहुमत स्क्रोल वा जैविक परिणामहरु कि तपाइँको वेबसाइट पाउन को लागी नेभिगेट कहिल्यै ... उनीहरु संग अन्तरक्रिया नक्शा प्याक खोज इन्जिन परिणाम पृष्ठ मा (SERP).
नक्शा प्याक खोज इन्जिन परिणाम पृष्ठ को नक्शा र तपाइँको भौगोलिक स्थान वरपर व्यापार सूची छ कि सेक्सन छ। यो SERP को बहुमत लिन्छ र खोज प्रयोगकर्ताहरु को लागी स्थानीय खुद्रा आउटलेट र सेवाहरु लाई खोज्न को लागी प्राथमिक सगाई सुविधा हो।
के धेरै व्यवसायहरु बुझ्दैनन् कि नक्शा प्याक विशुद्ध रूप मा तपाइँको Google मेरो व्यवसाय खाता मा आधारित छ, छैन तपाइँको वेबसाइट। क्रम मा नक्शा प्याक मा उच्च रैंकिंग र दृश्यता को बनाए राख्न को लागी, तपाइँको ब्यापार खाता राम्रो संग लगातार र भर्खरको समीक्षा र अपडेट संग राखिएको हुनुपर्छ। यो उनीहरुको साथ गर्न सजिलो छ मोबाइल अनुप्रयोग... तर त्यो अझै पनी तपाइँ अझै पनी अर्को मंच को प्रबंधन को लागी तपाइँको स्थानीय व्यापार को मार्केटि requires गर्न को लागी आवश्यक छ।
कसरी गुगल मेरो ब्यापार मा सिन्डिकेट गर्न को लागी
के हुन्छ यदि तपाइँको ब्यापार एक महान रखरखाव छ WordPress साइट र ब्लगि regularly नियमित? त्यो तपाइँको प्लेटफर्म, फिड पाठकहरु, र यहाँ सम्म कि सामाजिक मिडिया अनुप्रयोगहरु को उपयोग गरी तपाइँको सामग्री सिन्डिकेट गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ वास्तवमै सरल सिन्डिकेशन (आरएसएस) खुवाउने।
जबकि छुने र प्रत्येक च्यानल को लागी सामग्री को प्रत्येक टुक्रा अनुकूलित सुधारिएको सगाई र प्रतिक्रिया दर उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै जसो कम्पनीहरु लाई मात्र यो गर्न को लागी संसाधन छैन। यो जहाँ स्वचालन आदर्श छ - र तपाइँको फिड बाट सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरु को लागी तपाइँको सामग्री सिन्डिकेट एक सही समाधान हो। धेरै प्लेटफार्महरु एक प्रस्ताव गर्दैनन् आरएसएस गुगल मेरो व्यवसाय विकल्प, यद्यपि!
OneUp र Google मेरो व्यवसाय
वनअप व्यवसायहरुलाई अनुसूची गर्न र उनीहरुको गुगल मेरो बिजनेस पोस्टहरु लाई स्वचालित बनाउन सक्षम बनाउँछ। प्लेटफर्म प्रयोगकर्ताहरु लाई एकै समयमा एक वा धेरै स्थानहरु मा पोस्ट गर्न को लागी सक्षम बनाउँछ, छविहरु, लि ,्कहरु, र कल-टू-एक्शन बटन जोड्नुहोस्। तपाइँ पनी तपाइँको फोटो सेक्सन मा छविहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
OneUp मात्र गुगल मेरो व्यवसाय को लागी होईन, यो ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इन्स्टाग्राम, र Pinterest संग एकीकृत गर्दछ। सुविधाहरु समावेश:
कोटिहरु संग एकाधिक खाताहरु प्रबन्ध गर्नुहोस् - सँगै समूह खाताहरु को लागी श्रेणिहरु बनाउनुहोस्, तब संगठित र ती वर्गहरु द्वारा पोस्ट फिल्टर।
सामाजिक मिडिया क्यालेन्डर -सबै आगामी र प्रकाशित पोस्ट को एक सिंहावलोकन हेर्नुहोस्, उनीहरुलाई सम्पादन गर्नुहोस्, र ड्र्याग र ड्रप दिन परिवर्तन गर्न को लागी।
Canva एकीकरण - मा छविहरु बनाउनुहोस् क्यानभा OneUp छोडेर बिना, र उनीहरुलाई सीधै तपाइँको पोष्ट मा थपिएको छ।
विश्लेषण -गहिराई एनालिटिक्स हेर्नुहोस् र स्वचालित रूपमा तपाइँको सबै सामाजिक मिडिया खाताहरु को लागी साप्ताहिक वा मासिक रिपोर्ट उत्पन्न गर्दछ।
ह्याशट्याग जेनरेटर - तपाइँको कीवर्ड संग सम्बन्धित हैशटैग को लागी सुझाव प्राप्त गर्नुहोस्, र स्वचालित रूप बाट तपाइँको पोस्ट मा वा पहिलो टिप्पणी मा (इन्स्टाग्राम को लागी) उनीहरुलाई जोड्नुहोस्।
बहु छवि र भिडियो पोस्ट -प्रत्येक पोस्ट मा5छविहरु, साथै भिडियो पोष्टहरु संग बहु छवि पोस्ट अनुसूची।
अनुसूची इन्स्टाग्राम कथाहरु - नेत्रहीन योजना र Instagram कथाहरु अनुसूची, र मोबाइल सूचनाहरु को माध्यम बाट उनीहरुलाई प्रकाशित गर्नुहोस्।
थोक अपलोड सामाजिक पोस्ट - अपलोड र CSV, गुगल ड्राइव, ड्रपबक्स, वा सीधै तपाइँको कम्प्यूटर बाट एकै पटक मा धेरै पोष्टहरु को तालिका।
फेसबुक - फेसबुक प्रोफाइल (मोबाइल अधिसूचनाहरु को माध्यम बाट), साथ साथै फेसबुक पेजहरु र समूहहरु लाई सीधा प्रकाशन को लागी पोस्ट अनुसूची।
तपाइँको OneUp 7-दिन नि: शुल्क परीक्षण सुरु गर्नुहोस्
खुलासा: म यो लेख भरमा सम्बद्ध लिंक प्रयोग गर्दैछु।
टैग: थोक अपलोड गुगल मेरो व्यवसायफेसबुक सिन्डिकेशनफिडफीड सिन्डिकेशनgmbगुगल मेरो व्यापारह्यासट्याग जेनरेटरInstagram कथाहरूस्थानीय खोजीस्थानीय एसईओमेरो व्यवसाय गुगल पोस्ट गर्नुहोस्आरएसएस फीडगुगल मेरो व्यापार अनुसूचीअनुसूची सामाजिक मिडिया पोस्टसामाजिक मिडिया क्यालेन्डरसिन्डिकेशन
प्रशंसनीय: एक हल्का, गुगल एनालिटिक्स को cookieless वैकल्पिक
5 तरिकाहरु कि सामाजिक सुन्ने ब्रान्ड जागरूकता तपाइँ साँच्चै चाहानुहुन्छ बनाउँछ